Response to the State of the Province Address - By M Khawula MPL
Response to the State of the Province Address (Zulu)
By M Khawula MPL
Kubalulekile ukuba ngiqale ngokubeka isithombe esiyiso sezinto ezingawudukisa umphakathi nezingashiya umlando ohlanekezekile uma zingalungisiwe.
Omunye umuntu nxa ekhonjiswa indwangu emhlophe, ubukhulu bayo bungangeshidi, ibe necashazi elimpisholo elibukhulu balo bungaphansi kukatiki enkabeni yayo, engabona kugqame icashaza elimpisholo endwangwini kunobumhlophe bendwangu uqobo. Kepha omunye engabona kugqame indwangu emhlophe kunebadlana-nje elingatheni kuyona. Nasempilweni-ke, kuyancika ngokuthi abantu izinto bazibuka bemi kuphi.
Kweminye yemibhalo yakhe uWilliam Shakespeare, ngesikhathi kufihlwa uJulius Caeser, nxa ekhuluma lapha emfihlweni uMark Antony uthi “The evil that man do lives after them, but the good is oft interred with their bones. So, let it be with Caeser”. IsiZulu-ke siyasho sithi kakukho soka lingenasici. Kuningi kakhulu okuhle okwenziwe nguHulumeni wakwaZulu owaphela ngo 1994 ukwenzela abantu baKwaZulu Natali kanye neNdlunkulu KaZulu uqobo. Kanjalo futhi kuningi kakhulu okwenziwe nguHulumeni wokuqala wentando yeningi waKwaZulu Natali ngo 1994 kuya ku 2004 ukwenzela bona abantu bakwaZulu Natali kanye neNdlunkulu uqobo.
Kube yinqubekela phambili enkulu ukuba uHulumeni omdala waKwaZulu ulwe noHulumeni wase Pitoli ngokuba isithunzi seSilo sikaZulu singalinganiswa nesaMakhosi angaphansi kweSilo, njengoba kwakunjalo ngaphambilini. Kuze kwafika ekubeni iPitoli likwamukele ukuthi KwaZulu kuno King hayi uParamount Chief njengoba iPitoli belikubiza kanjalo ngaphambilini. Ukwakhiwa kanye nokunakekelwa kwezigodlo zeNdlunkulu kuyinto eqale kuzo lezi zikhathi ebezinzima kakhulu. Ukunakekelwa kweNdlunkulu ngezidingo zempilo obekuzokwenza kuhlonipheke lesi sihlalo kuqale ngazo lezi zikhathi ebezinzima. Ukutshala umqondo kubantu baKwaZulu Natali wokubonakala kubalulekile ukukwenza lokhu kanye nakubantu baseNingizimu Afrika bekunzima, abanye bephikisana nakho besho khona ukuthi kumoshwa inkece yabakhokhintela nanjengoba abanye besakusho ngisho nanamuhla. Lokhu kwaqala ngazo leziya zikhathi ezabe zinzima.
Uphiko lwe Royal Household olusemnyangweni kaNdunankulu luqaliswe ngazo leziya zikhathi ebezinzima. Basekhona nakuyo lendlu, kanye nakuyo leKwaZulu Natali esiyakhele, ababephikisana nalokho ngoba bethi kuwukumosha inkece, kepha kwenziwa ngoba kwakunombono ojulile ngoba kuvikelwa iNdlunkulu yakithi. Ngingakusho ngingananazi ukuthi, okulandele kamuva kwenziwa ngabanye oHulumeni bezinye izifundwazwe bekwenzela izingonyama zabo, okuningi kwako bebekuthathisela lapha KwaZulu Natali.
Ukuvikelwa kwamagugu esizwe okuze kwakhelwa isigungu esibizwa nge Heritage Council of KwaZulu Natal (Amafa aKwaZulu Natali) kuqaliswe yibo laboHulumeni ngezikhathi ebezinzima. Namuhla sesiyaziqhenya ngokuba namagugu afana neSandlwana. Kuwo lonyaka ophezulu, kuthe uMhlonishwa uMengameli weZwe umMnumzane J. G. Zuma uma evakashelwa nguzakwabo wase Uganda uMhlonishwa Yuweri Moseveni, wabona kumfanele ukumvakashisa emcimbini oyigugu waseSandlwana. Somlomo kwaqala kuphi ngomcimbi waseSandlwana wokuveza iqhaza lobuqhawe bukaZulu? Namuhla siwuZulu sihlonishwa umhlaba wonke phakathi kokunye ngokulondolozwa komlando wegugu lethu ILembe. Namuhla sinegugu esiziqhenya ngalo umuzi weSilo wasoNdini okulondolozwe kuwo umlando ojulile kaZulu. Sinendawo engumlando lapho kulele khona amaKhosi amaningi ombuso kaZulu olondolozwe eMakhosini (The Valley of Kings). Konke lokhu kuqalwe ngaleziya zikhathi ebezinzima.
Engingakusho ukuthi, izinto uma ziqalwa, zisuke zinombono wokuthi ngelinye ilanga ziyokhula zibe zinkulu ngendlela ephakeme kakhulu kunalapho kwaqalwa khona. Esikubheke kuHulumeni namhlanje wukuthi lezi zisekelo ezabekwa ngabakwendulela Ndunankulu zikhuliswe kungabhekiwe ukuthi bona babekumaphi amaqembu.
Kwaba yisivumelwano esihle salendlu ngaphansi kombono nobuholi beQembu leNkatha liphethe waze ukuba leli Phalamende laKwaZulu Natali liyovulwa ngokusemthethweni yiSilo Samabandla yomke iminyaka nxa kuqalwa umsebenzi wephalamende. Izindaba zokuthuthukiswa nokuphathwa ngobunono kweNdlunkulu kithina beqembu leNkatha zingezibaluleke ukwedlula yonke eminye imisebenzi yobuHulumeni balesifundazwe, ngoba zithinta ubuthina nesithunzi sikaZulu wonkana. Kalikho elinye iPhalamende lapha eningizimu Afrika elivulwa yiSilo saleso sifundazwe ngaphandle kwaleli lethu. Lokhu siyaziqhenya ngakho.
Mhlonioshwa Ndunankulu eqenjini leNkatha Yenkululeko sikunika isethembiso nesiqiniseko sokuthi uyohlala njalo unabangani kithi nxa kukhulunywa ngezindaba zeNdlunkulu, ngoba sinomlando omude wokuholwa ngumholi eqenjini lethu oqale ukukhuluma ngalezi zindaba ngesikhathi lapho bekufana nobutha ukuvikela ubukhosi. Ezindabeni eziningi ezithinta ukusatshalaliswa kwentuthuko nokulethwa kwezidingo kubantu, uMhlonishwa uNdunankulu akhulume ngazo, thina siyahambisana naye futhi kasibasha kulezi zindaba. Kube wumbono womholi wethu uMntwana waKwaPhindangene ukuvikelwa kwamalungelo obunikazi kwabesifazane abampisholo KwaZulu ngesikhathi kuchitshiyelwa umthetho iNatal Code of Zulu Law ukuze nabo banikwe ilungelo lokuba nobunikazi okwakungekho ngaphambilini.
Iningi intuthuko egijinyiswe emphakathini kwakhiwa izikole, imitholampilo, izibhedlela, imigwaqo, amakolishi obuthishela, nokunye, kusizwa izindawo zabantu bakithi. Kusungulwe izizinda zomnotho ezifana nakwaSithebe eMandeni, eNewcastle, Ladysmith (Ezakheni), kwaye kwakhiwa inhlokodolobha uLundi nenxanxathela yamahovisi kaHulumeni. Kuningi okwenziwe okuhle esingeke sibe naso isikhathi sokokubala konke.
Into ebalulekile Somlomo ngukuthi, njengoba le foundation eyakhiwa yabe iqine kangaka, zimi kanjani izinhlelo zokuba singahlehleli emuva njengesifundazwe kepha siqhubekele phambili ngomgqigqo omkhulu nentuthuko yesifundazwe. Kube ngumbono omuhle ngo 1993 ukuvikela umhlaba weSilo nezwe laKwaZulu ngokuphasisa umthetho iKwaZulu iNgonyama Trust Act, lomthetho ozala Ingonyama Trust Board. Uma konke lokhu kwabe kungeyona intuthuko nenqubekela phambili, labo abazi kancono mabasitshele ukuthi kwa kuyini igama lakho.
Mhlonishwa Somlomo inkulumo kaMhlonishwa uNdunankulu ikhulume ngezinto eziningi ezibalulekile nokho ezisala zilenga emoyeni. Ngethemba abahlonishwa oNgqongqoshe beminyango bazosicacisela ukwenzeka kwazo ezinkulumweni zabo. Laphaya kwezolimo uNdunankulu ukhuluma ngosizo lokulinyelwa kwemiphakathi nanjengoba noNgangezwe lakhe ephawulile ngako. Kufanele sazi ukuthi izinhlelo zokulungisa okulimele (Mantainance programmes), zizoma kanjani ukuze loluhlelo lusabalale kahle. Phela kwezinye izindawo ogandaganda abethulelwa umphakathi nguHulumeni sebemile ngoba bedinga ukukhandwa. Ngiyathokoza ngokuthinteka kodaba lokukwakhiwa kwezinkundla ebezizosetshenziswa ngendebe yomhlaba. Kepha uhlelo lokuzigcina zisesimweni futhi zihlale zisebenza ukuze zingaphenduki izichuse (ezinye zazo), kangiluzwa. Abanye omasipala bayakhala ngokuthi lezinkundla zithatha okuncane okukhona kokuletha izidingo emphakathini ngoba ukuzigcina zisesimweni esihle kumba eqolo. Luphi uhlelo oluqondile lokuthi lezi zinkundla zikwazi ukuziphilisa zona ngokwazo ngaphandle kokuncika ezikhwameni zomasipala.
Ezinye izinto oziqalile Mhlonishwa Ndunankulu uma ungena kulelihovisi kasisakuzwa uphawula ngazo kanye nenqubekela phambili yazo kumbe izingqinamba ezibhekene nazo. Asazi-ke noma sekuwukushabalala kwazo lezo zinhlelo emehlweni ezwe kanye nasemphakathini. Ngonyaka owedlule uNdunankulu uphawule ngokusungulwa kwePlanning Commission yesifundazwe kanye nomthelela omuhle ebizoba nawo kwiProvincial Growth and Development Strategy (PGDS), ukulumbaniswa kwama plani epublic nawe private sector. Angimuzwanga uNdunankulu ekhuluma ngombiko walekhomishana engicabanga ukuthi ibingeminye yemibono abalulekile. UNdunakulu uze wakugcizelela ukubaluleka kwayo wathi, “This matter will be one of the most important considarations as we move into the future”. Ukungasho lutho ngayo kungabe kusho ukuthlanje?
Mayelana nokulethwa kwezidingo kanye nokusebenza kahle kukaHulumeni uNdunankulu ngonyaka ofile uphawule ngokusungulwa kweHovisi le Ombudsman ukeze kuqikelelwe ukwaneliseka kwezakhamizi (customer satisfaction). Asimuzwanga uNdunankulu esibikela ngenqubekela phambili kulokho osekwenziwe mayelana naloludaba lwe Ombudsman.
UNdunankulu uphawulile ngokulwisana nenkohlakalo nanjengoba neSilo saMabandla sikhalile ngaloludaba. Ngiphawule ukuthi nangonyaka ofile uMhlonishwa uNdunankulu wasethembisa ukuthi uzokwenza uphenyo ngamazinga empilo aphilwa ngabantu abathize abasolakalayo (Life style audit). UNdunankulu akasitshelanga ukuthi sekuphenywe kwafikwa kuphi ngamazinga okuphila abantu abangosibanibani. Kuyafiwa nakuso lesi sifundazwe ngenkohlakalo, ngokuchema kokulethwa kwezidingo, ngokwenzelela kokwabiwa kwemisenzi kaHulumeni ngendlela echemile, kucebiswe abantu abathize baze behluleke ngisho ukuzenwaya, ukuqashana ngokwazana nangobungani. Kulesi sifundazwe sekunetemu lokuthi uma kukhangiswa imisebenzi bese uzwa kuthiwa hayi leyo post ngekanozibanibani. Uhlulwa yini umhlonishwa uNdunankulu ukusungula icommission ezolwa ngqo nalemikhuba eminyangweni yonke kaHulumeni kanye nakomasipala besifundazwe.
Thina beqembu leNkatha siyakuhlonipha Ndunankulu, ikakhulukazi ngoba siyazi ukuthi ungomunye wabaholi beqembu elibusayo abambalwa abamhloniphayo uMntwana waKwaphindangene nalokho akwenzile. Kufanele ngabe bonke laba obaholayo bayathathisa lapha kuwe. Khuza nalu ulusha lukaKhongolose Khabazela lungangibeli ekhanda loMntwana waKwaphindangene ngalendlela abenza ngayo. Siza Khabazela khuza nantu ulusha lwaMakhomanisi lungagibeli phezu kwekhanda leSilo neNdlunkulu nobuKhosi bukaZulu. Abaningi lapha kulendlu yakho Somlomo, nabaningi kubabasebenzi balendlu nabaloHulumeni, nabaningi kulezethameli ezisihambele namuhla, baphume futhi badlule ezindaweni ezisungulwe ngumNtwana waKwaphindangene ephethe uHulumeni waKwaZulu. Uma nibahle ngemisebenzi yenu kanye nezinto enizenzayo nenzela umphakathi zizinhle njengoba nihlale nisho, hhawu, waze wamuhle uMntwana waKwaPhindangene. Uma uMntwana konke nje akwenzile kukubi njengoba kuyaye kungathekiswe, maye, name naze nababi bo enidlule kulobubi balezizandla zoMntwana.
KuleSifundazwe, kufanele engabe niyaziqhenya ngokuba nomakadebona kaSombusazwe ongakwazi ukunifaka eklasini anifundise ngeNkosi uLuthuli, anifundise ngoMnuz. O.R. Tambo, anifundise ngoTata uMadiba, anifundise ngoMnuz. uJohnny Makhathini, anifundise ngoSobaba uMbhishobhi u-Alpheus Zulu, anifundise ngoMqali wendlela weBandla lamaNazaretha u-J.G. Shembe kanye nabanye abaningi abangasekho. Uma uMntwana enexwayisa ngokuziphatha njengabaholi kanye nemiphumela engase izalwe ilokho kuziphatha usuke engasho kona ukuthi abantu ababe nodlame njengoba kade sekubikwa kwimithombo yabezindaba. Bese-ke kugijima ocathucathu bezombusazwe babe ngosiyazi bodlame abakhulu.
Kubalulekile ukuthi uHulumeni asakhele ubudlelwano obuhle nobuhlobo namanye amazwe kanjalo naphakathi kukaHulumeni nezimboni ezizimele. uMhlonishwa uNdunankulu uphawulile ngobudlelwane nezindawo eziningi azihambele kanye nobudlelwane obufana nesinabo nabantu abafana no Mnu Rosenberg. Lokhu kuhle futhi kuyadinga ukukhuthazwa. uMntwana waKwaPhindangene wasakhela izikole eziningi ngokuba nobudlelwane nezinhlangano ezifana ne Divine Life Society. Okubalulekile futhi ngukugqugquzela nohlelo lwe Phalamende ukuba amalungu nxa ethunywa ajwayele ukuhanjiswa kulezindawo okusuke kukade kuye kuzo uNdunankulu kanye noHulumeni.
Abantu baKwaZulu Natali Ndunankulu bayantula futhi kusazothatha isikhathi ukuqeda leligebe lobuphofu. Akungathi kuhlushekwa kangaka, kepha sicoshe imibiko yokuthi kunenkece yokwakha izindlu ephindele emuva ebhodweni elikhulu ePitoli ngoba thina simane sayibuka nje sangakwazi ukuyisebenzisa. Abantu baKwaZulu Natali bayazidinga izindlu. Osomabhizinisi baKwaZulu Natali basayidinga imisebenzi yokwakha. Abantu abangasebenzi balesifundazwe basawadinga amathuba emisebenzi. Okubuhlungu kakhulu nxa sesizwa uNdunankulu ethi akazuthathelwa oshe owenze lokhu.sibe singakezwa ukuthi wenze phenyo luni wase etholani. Asiqine isandla Ndunankulu kungabi kwamachanca lapha kuHulumeni wakho.